Waa Maxay Ifafaalaha Deyncafinta Soomaaliya? | JAMHURIYADDA
Home Dhaqaalaha Waa Maxay Ifafaalaha Deyncafinta Soomaaliya?
Waa Maxay Ifafaalaha Deyncafinta Soomaaliya?
Bankiga Adduunka iyo Hay’adda IMF ayaa Khamiistii February 13, 2020 shaaciyay in ay tixgelin doonaa uqalmidda Soomaaliya barnaamijka deyn cafinta gaarka ah ee dalalka soboolka ah “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiative.” Bishaaradaas weyn waxay ka dhalatay qiimeynta warbixin hordhac ah oo laga soo gudbiyay hawlaha dibuhabaynta maaliyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya.
Agaasimaha Guud ee IMF Marwo Kristalina Georgieva ayaa horey u sheegtay in guddiga fulinta hay’adda ay oggolaadeen qorshe dalalka xubnaha ka ah hay’adda lacag looga soo ururinayo, si loo daboolo deynta ay ku leedahay Soomaaliya. Go’aanka kama dambeysta ah ee deyn cafinta waxaa la filayaa in la gaari doono dhammaadka bisha February, kaddib markii maaamulka sare iyo guddiga fulinta IMFtu helaan dammaanad lagu qanco.
October 2019 ayaa dowladda Norway amaahisay Soomaaliya lacag hormaris ah oo dhan 3.135 billion Krone oo ah lacagta Norway, si loogu bixiyo deynta haraaga ah ee Bankiga Adduunka. Guddoomiye David Malpass, ayaa Khamiistii dhawayd sheegay in “Bankiga Adduunka uu qorsheynayo inuu u bandhigo howlgalka lagu tirtirayo deynta laantiisa IDA dhammaadka bisha February” (VOA Africa 14/02/2020).
Shaki kuma jiro, in xilka warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ah uu yahay kula xisaabtanka dowladda dhexe iyo maamul-goboleedyada barnaamijkooda la dagaallanka musuqmaasuqa, weliba waxaa laga sugaayaa dowladda dhexe inay kordhiso kharashyadeeda adeegga bulshada, iyadoo tixgelin gaar ah la siinayo waxbarashada ardayda ku nool gobollada ay ku badan yihiin barakacyaasha iyo dadka saboolka ah. Waxbarashada carruurta oo laga ildhuufo amase dib u dhacda waxay xujo ku noqon kartaa horumarka dowlad-wanaaga iyo koboca dhaqaalaha dalka oo muhiim u ah hannaanka deyn cafinta kama dambeynta ah.
Maqaalka waxaa laga yaabaa inuusan dhammeystirneen oo la cusbooneysiin karo ama dib loo eegi karo mustaqbalka. Haddaba, haddii aad dib u dhaabacayso, fadlan xus inaad ka soo xigatay Wargeyska Jamhuriyadda.
Haddii aad dooneyso in aad soo gudbiso fikrad ama falanqeyn, fadlan ku soo hagaaji emailka jamhuriyadda@gmail.com – Dhammaan xuquuqda maqaalka waxaa leh Wargeyska Jamhuriyadda. Masawirka: Internetka ayaa laga soo amaahsaday.
Previous articleNidaam Federaal oo ay Dowladda Dhexe Hoggaamineyso Ma Hirgeli Karaa
Next articleCarcarta Siyaasadda Dibuheshiinta iyo Dibuggurshada Imaaraadka